လွယ်ကူစားကောင်း အာလူးကတ်တလိတ် လုပ်စားရအောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Food, Drink & Recipes » လွယ်ကူစားကောင်း အာလူးကတ်တလိတ် လုပ်စားရအောင်	33
လွယ်ကူစားကောင်း အာလူးကတ်တလိတ် လုပ်စားရအောင်
Posted by အောင် မိုးသူ on Mar 13, 2015 in Food, Drink & Recipes | 33 comments
ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ အာလူးကတ်တလိတ်ပေါ့။ အာလူးကို အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံလုပ်စားကြတဲ့အထဲမှာ အာလူးကတ်တလိတ်ဟာလည်း လူတော်တော်များများနှစ်သက်ကြတဲ့အထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ အဓိကအာလူးကတ်တလိတ်လုပ်တဲ့အခါ အာလူးဟာကြော်လိုက်ရင် ကွဲသွားတာကိုအတော်များများကြုံကြရပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ လွယ်ကူသက်သာစားကောင်းတဲ့ အာလူးကတ်တလိတ်လုပ်စားကြရအောင်ဗျာ။
အဆင့်(၁) အာလူးကိုပြုတ်ထားရပါတယ် အကြီးကြီးတွေမဟုတ်ဘဲ အနေတော်ဆို ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
အဆင့်(၂) အာလူးကိုပြုတ်ပြီးရင်တော့အခွံနွှာပြီး ထက်ပိုင်းလေးတွေ ချေထားလိုက်ပါ။ ကြက်သွန်နီ အနေတော်အလုံးတွေကို ရှစ်စိတ်လောက်ခြမ်း အာလူးနဲ့ရောထား။ ပြီးရင်တော့ ထောင်းပါ့မယ်။
အာလူးဟာထောင်းရင် ငါးဖယ်လိုစေးလာပါလိမ့်မယ်။ အာလူးထဲက ကြက်သွန်ဟာလည်း မညက်တစ်ညက်လေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ငရုတ်ဆုံထဲက ကော်ထုတ်လို့ရပါပြီ။
နောက်ထပ်မဆလာကြိုက်သူကတော့ မဆလာရယ် ဟင်းခတ်မှုန့်လေး အနည်းငယ်ရယ် ဆားရယ်ကို အနေတော် ရော်နယ်ရပါမယ်။ အကြော်မှုန့်လေးအနည်းငယ်ပါ ရောနယ်ပါ။ အကြော်မှုန့်မရှိရင် ကော်မှုန့်လည်းရပါတယ်။
နယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဆီပူအောင်တည်ထားမယ်။ အာလူးကို အနေတော်အလုံးလေးတွေလုံးမယ်။
မ်းစေးတဲ့အတွက် လက်ကိုရေလေးစွတ်ပီးလုံး လုံးပြီး အကြော်မှုန့်ဖြစ်ဖြစ် ၊ ကော်မှုန့်ဖြစ်ဖြစ် ကပ်ပေးထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင်ကြော်လို့ရပါပြီ။
န်းလာပြီဆိုရင်တော့ အာလူးကတ်တလိတ်ရပါပြီ။ အပေါ်ယံခပ်ပါးပါးကျွတ်ကျွတ်လေးနဲ့ အထဲက အိပြီး စေးပိုင်နေတဲ့ အာလူးရဲ့အရသာအလွန်ပဲစားကောင်းပါတယ်။ ကဲ ကြော်စားကြည့်ရအောင်ဗျာ။
ခင်ဇော် says: ဘယ်သူထောင်းပေးမလဲ မသိ။
အဲဒီ အဆင့်မှာတင်ပဲ လုပ်ချင်တော့ဘူးး
အောင် မိုးသူ says: ထောင်းတာက မပင်ပန်းဘူး ခဏပဲ ထောင်းရတာ။
Crystalline says: အသား​လေးသွတ်​ရင်​ပို​ကောင်းမလားမသိ… အသား​လေးပါသွတ်​​ပေးပါ… စားချင်​​နေတာကြာပြီ…. လုပ်​ရမှာပျင်း​တော့လည်းမစားရ… … အာလူးက အရမ်းကြိုက်​တဲ့အစားထဲလည်းပါတယ်​… :-)
အောင် မိုးသူ says: ဒါကတော့ သက်သက်လွတ်ပေါ့။ အသားလည်းထည့်ငုံလို့ရတာပါပဲ။ ကျတော်ကတော့ ၀က်သားကိုပိုကြိုက်တယ်။
Kaung Kin Pyar says: စားကောင်းမယ့်ပုံ..
လုပ်ရလဲ လွယ်တယ်…..။ သို့သော်….အာလူးဆီကြော်မို့….
ဟွာလေ…နွေရာသီမယ် စားလို့လဲ ကောင်းပြီး အိပ်ချင်ပြေမယ့် ဟာလေးတွေရှိရင် တင်ပါဦးညှော်…
အောင် မိုးသူ says: နွေရာသီအစားအစာလေးလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ အိမ်မှာလုပ်စားပြီး ပုံရိုက်ထားမှ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်လား။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ဦးလေးကျောက်စ်ကတော့ အာလူးကတ်တလိတ်လုပ်ရင်…
အလယ်မှာ ဆိတ်သား ကြက်သားလေး ဋ္ဌာပနာပြီးလုံး…
ကြက်ဥအကာရည်လေးစိမ် Bread crumbs လေး ကပ်ပြီးမှ ကြော်တယ်… ခွိ
အောင် မိုးသူ says: ဟုတ်တယ် အူးကျောက် အသားတစ်ခုခု ဌာပနာထားလည်းရတယ်လေ။ ဒါကတော့ အလွယ်တကူပေါ့။ Bread Crumbs ကပ်ပီးကျော်လည်းကောင်းတာပဲ။ ဒီဟာကတော့ မြန်မာဆန်ဆန်ပေါ့။
Alinsett@Maung Thura says: အာလူးကိုတော့လား
အမေ ဈေးက ဘယ်လိုချက်ဖို့ဖြစ်ဖြစ် ဝယ်လာရင်
အရင်ဆုံး လေးငါးလုံး ယူ ရေဆေးပြီး ပြုတ်တာ
အာလူးကို ဒီအတိုင်းအစိမ်းတောင် ကိုက်စားချင်လောက်အောက်ကြိုက်မိတာ
အာလူးနဲ့ လုပ်တဲ့ ဘယ်လိုအစားအစာမဆို ကြိုက်တာ
ကုန်ကုန်ပြောရရင် ဒေါ်ဖွားမေနဲ့ အာလူး
ဘယ်သူ့ ရွေးမလဲ လို့ မေးရင်
Shwe Ei says: -သများလဲ ကြော်နည်းမသိလို့…တစစီဖစ်သွားကထဲက.
-တခေါက်လောက်တော့ ထပ်စမ်းကျိအူးမှဘဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1680
အောင် မိုးသူ says: လွယ်ပါတယ် တစ်စစီမဖြစ်ဘူး စမ်းကြည့်နော်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1350
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .@ မရွှေအိ ရေ
.အာလူးကို ပြုတ်တဲ့အခါ သိပ်နူးသွားအောင် မပြုတ်ရဘူး။ အနူးလွန်သွားရင် ပြန်ကြော်တဲ့အခါ ကြေသွားတယ်။ မနူးတနူးလေး ပြုတ်ရင် ရပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အားနည်းနည်း စိုက် ထောင်းရတယ်။
Wow says: ဆန်မှုန့်ကော်မှုန့်မသုံးဝူး၊ ကြက်သွန်ထဲ့မထောင်းဝူး ဒီအတိုင်း ဆားလေး အရသာမှုန့်လေးနဲ့ အာလူးကိုထောင်းပီး အလယ်မှာ အဆာသွတ် ကြက်ဥခေါက်ထားတာလေးနဲ့ နှစ်ကြော်ဒယ်… ကောင်းမှ ကောင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1680
အောင် မိုးသူ says: အဲ့လိုလည်း ကောင်းတာပဲဗျ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4010
manawphyulay says: လာလည်ရင် အဲလို လုပ်ကျွေးမှာလားဟင်….
အောင် မိုးသူ says: အားတဲ့ရက်ဆို လုပ်ကျွေးပါတယ်း))
ခင်ခ says: အာလူးအကျစ်(တောင်ပေါ်အာလူး)က အဆီးဓာတ်ရှိတော့ သိပ်မကောင်းဘူး၊ အာလူး(အဖွယ်)သီးနဲ့ မှ ပိုစားကောင်းတယ်လေ။
မွသဲ ( 17082011 ) says: သများတော့ထောင်းဝူး။ လက်နဲ့ပဲခြေတယ် ငြုတ်ဆုံမချိလို့ ဟိဟိ။ စီးနေအောင်ခြေတယ်။ ကြက်သွန်နီပါရင်တော့မကြိုက်လို့ ကြက်သွန်နီတော့မထည့်ဘူး။ အဲ့ ပိန်သွားမစိုးလို့ ချိစ်ကလေးတော့ထည့်တယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1680
အောင် မိုးသူ says: အအီအစိမ့်မကြိုက်လို့ ကြက်သွန်နီတော့ကြိုက်လို့ထည့်တာ….။ ကိုယ်ကြိုရာလေး ထွင်စားတော့ ကောင်းတာပေါ့ ဟဲဟဲ။
Courage says: ကျေးဇူး ကိုအောင်မိုးသူ။ လုပ်စားကြည့်လိုက်ဦးမယ်
အောင် မိုးသူ says: ဟုတ်ကဲ့ ချက်စားကြည့်နော်
Courage says: အာလူးကြော်က သိပ်ပြီး မာမာတောင့်တောင့်လေးမနေပဲ ပျော့သွားတယ်။ ဘာများလိုသွားပါလိမ့်????
naywoon ni says: အာလူး​ခြောက်​​ကြော်​က​တော့ ဘီယာနဲ့ မြည်းလို့ ​ကောင်းဗျ ။ ကပ်​သလတ်​က​ကော ဘီယာနဲ့ မြည်းလို့ ​ကောင်းပါ့မလား ။
အောင် မိုးသူ says: မြည်းတတ်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့။ အာလူးခြောက်ကြော်စပ်စပ်ကတော့ပိုကောင်းဗျာ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အကြိုက်ဆုံး အစားအစာပဲ.. ဒါမယ့်.. သများက ဆီနှမြောတော့ ဘယ်တော့မှ မကောင်းဘူးရယ်.. ဟိ
အောင် မိုးသူ says: ဆီအများကြီးမကုန်ပါဘူး မွန်မွန်ရဲ့။
တောင်ပေါ်သား says: အိမ်က ကလေးတွေလည်း ကြိုက်သဗျ
အောင် မိုးသူ says: စမ်းကြည့်ပါ ဗျ…..
မြစပဲရိုး says: တစ်သက်နဲ့ တစ်ကိုယ် တစ်ခါမှ အာလူးကတ်တလစ် မလုပ်ဖူးဘူး မောင်အောင် ရေ့။
ကြိုက်တာကတော့ အလွန်ကြိုက်သော အစားထဲ မှာပါတယ်။
အိမ်တုန်းက အမေ က လုပ်ပေးတယ်။
ဒီမှာတော့ ရယ်ဒီမိတ် အထုတ် တွေ ကို oven ထဲ ထည့်ပြီး လုပ်တယ်။
ဆီ နဲ့ မကြော်ဘူး။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် စေတနာ နဲ့ မျှပေးတာလေး အတွက် ကျေးဇူးပါ။
အောင် မိုးသူ says: အခြေအနေတစ်ရပ်ပေးလာရင် Oven လေး ၀ယ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်။ ခုလောလောဆယ် အိမ်က ယိုင်နဲ့နဲ့ရယ် Oven လေးရရင်တော့ ချက်စရာတွေ တစ်ပုံတစ်ပင်ရယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: မထောင်းဘဲ ကြိတ်လိုက်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲ…
အောင် မိုးသူ says: ဘလန်ချာနဲ့ ကြိတ်ရင်မကောင်းဘူး သဂျားရဲ့
Ma Ei says: အာလူးထဲကို ကြက်သွန်နီ၊ ဆား၊မဆလာ၊ငရုတ်စိမ်းမှုန့်၊ကြက်သားပြုတ်ကြော် အဆာလေးတွေထည့်ကြော် ပိုစားကောင်း…